भूकम्पपीडितको एकै स्वर-‘प्राविधिकको मुख देख्न पाएनौ’ – इन्सेक
दोलखा ०७३ कात्तिक २९ गते
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा कात्तिक २९ गते सुन्द्रावती गाविसको कालिका उच्च माविमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश भूकम्प पीडितले प्राविधिकको नाकमुख देख्न नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
कार्यक्रममा स्थानीय तुलसा मैनालीले सरकारले भूकम्प पीडितको घर निर्माणमा प्राविधिक सहयोग गर्न कर्मचारी नियुक्ति गरेको सात महिनासम्म प्राविधिकको मुख देख्न नपाएको गुनासो गर्दै भनिन्-'आफ्नै खर्चमा घर निर्माण गरेको थिएँ । तर, नक्सा जाँचपास गरिदिएनन् ।'
'गरिव जनताको घर बनाउने अर्को घडेरी छैन । पुरानो घडेरीमा घर निर्माण भइसक्यो । प्राविधिक समयमा आउँदैनन् । कता बस्छन् ? थाहा छैन । अहिले घरको नक्सा जाँचपास हुन्न भन्छन् । सरकारले अर्को घडेरी उपलब्ध गराइदिनु पर्‍यो ।'-तुलसाले भनिन् ।
कार्यक्रममा धनमती वस्नेतले टिनको जस्ता मुनीको बास हुँदा बालवालिका, ज्येष्ठ नागरिक र बिरामीलाई बढी समस्या हुने, दिनमा टिनको तातो र रातमा शीतले ओढ्ने ओछ्याउने भिज्ने गरेको गुनासो गरिन् ।
भूकम्पपीडित सुकुमाया वली भन्छिन्-'भएको जग्गामा घर बनाइसकियो । अर्को जग्गा छैन । सरकारले अनुदान रकम दिएकोमा अर्को घर कहाँ बनाउने ? घडेरी उपलब्ध गराई दिनु पर्‍यो ।'
सुनखानी गाविस-६ का पूर्णबहादुर शिवाकोटीले आफ्ना दुई घर ढलेको तर तथ्याङ्क विभागले सङ्कलन गरेको लाभग्राही सूचीमा नाम नरहेकोले छुटेको लाभग्राहीको नाम कहिले समवेश हुन्छ भनी प्रश्न गरे ।
नेपाली काङ्ग्रेसका गाउँ सभापति रामप्रसाद मैनालीले भने-'सुन्द्रावती गाविसमा ३६ वास्तविक भूकम्प पीडितको लाभग्राहीमा नाम छुटेको छ । प्राविधिकका कारण छुटेको जानकारी आयो । तर, ती पीडितको गुनासो कहिले र कस्ले सुन्छ ?'
कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बालकृष्ण कटवालले जिल्लामा रहेका हरेक कार्यालयले माथिल्लो निकायको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, नागरिकका गुनासो माथिल्लो निकायमा सम्प्रेषण गर्ने गरेको जानकारी दिँदै प्राविधिकहरू नियमित तोकिएको क्षेत्रमा रही पीडित जनतालाई सहज ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बताए ।
'छुटेका लाभग्राहीको बारेमा जिल्लाबाट केन्द्रमा विवरण पठाइसकिएको छ । जिल्लाबाट पुनः ताकेता गरिनेछ । तर, कुन मितिसम्म छुटेका घरधुरीको व्यवस्थापन हुने भन्ने निश्चित भन्न सकिँदैन ।'-उनले भने ।
जिल्ला विकास समिति दोलखाका सामाजिक विकास अधिकृत नारायणप्रसाद सेढाईले छुटेका लाभग्राहीको नाम यथासक्य चाँडो निर्णय ताकेता हुने, समुदायका लागि आयआर्जनका गतिविधि सञ्चालनका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी तहमा योजना निर्माणका लागि पहल गरिने र प्राविधिकले तोकिएको समयमा जनताका घरदैलोमा पुगी सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा आवास निर्माण प्राविधिक निशानकुमार पौडेलले आगामी दिनमा सहज सेवा प्रवाह गरिने बताए ।